DHEEGYSO-Madaxweyne ku-xiegeenka Puntland oo arrimo badan kahadlaya. – Radio Daljir
Febraayo 18, 2017 10:28 g 0
Boosaaso, Feb 19 2017-Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ahna ku-simaha madaxweynaha Eng Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey Daljir kaga hadlay arrimaha ammaanka, abaaraha iyo siyaasadda Soomaliya.
Eng Camey ayaa sheegay in ammaanka guud ee Puntland uu hadda wanaagsanyahay, wuxuuna ugu baaqay shacabka inay ciidanka ammaanka kala shaqeeyaan sidii ay u qaban lahaayeen dadka falalka ammaan xumo aloosaya.
Madaxweynuhu wuxuu sidoo kale ka hadlay doorashadii dhowaan kadhacday Muqdisho isagoona tilmaamay in haddii madaxweynaha cusub uu qorshe wadashaqayneed layimaado uu hagaagi doono xiriirka kala dhexeeya maamulada dalka kajira.
DHEGEYSO-Heerka dhaawicii soo gaarey taliyihii saldhiga magaalada Qardho.